Others Archives - Yangon Media Group
ရနျကုနျ၊ ဩဂုတျ ၂၈- နားမ ကွားသောကလေးမြားအတှကျ သငျထောကျကူပွုပစ်စညျးမြား အ သုံးပွုရနျနှငျ့ အာဟာရကြှေးမှေး ရနျ အစိုးရ ဘတျဂကျြအနဖွေငျ့ ထောကျပံ့မှုပေးထားသျောလညျး လိုအပျခကျြမြားရှိနဆေဲဖွဈ၍ အ လှူရှငျမြား ပါဝငျလှူ ဒါနျးနိုငျ ကွောငျး သိရသညျ။...
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၉ - အလုပ် ထုတ်ခံရသဖြင့် တိုင်ကြားလာ သည့်အမှုများကို ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ ကောင်စီတို့ဖြင့်သာ ဖြေရှင်းပေး ရေးအပါအဝင် တောင်းဆိြုွေကး ကြော်သံသုံးချက်ဖြင့် အစိုးရသို့ အလုပ်သမားထောင်ချီ ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့်...
နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် ၂၉ - ရှမ်း ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ယာယီ ပိတ်ထားသည့်ကျောင်းများအနက် မှ (၅၅)ကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ် ထားကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်း ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဩဂုတ် ၂၉ ရက်မွန်းလွဲပိုင်း နေပြည်တော်ရှိ ပညာရေးဝန်ကြီး...
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၇- နေပြည် တော် စည်ပင်ရိပ်သာအတွင်း ဗုံး လန့်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က အမှု ဖွင့်ထား သည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အ ကောင့်များကို တစ်လကျော်ကြာ သည်အထိ ခြေရာခံမမိသေး ကြောင်း ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်...
ပုသိမ်၊ ဩဂုတ် ၂၇- ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ မြကျွန်း သာအိမ်ရာအနီး တုတ်၊ ဓား ကိုင် ဆောင်၍ လမ်းသွားလမ်းလာများ ကို အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ရမ်းကားခဲ့သည်ဟုဆိုသူ လူငယ် ၁၀ ဦးကို ဖမ်း ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး...
မင်းလှကျောက်မီးသွေးတွင်းပြိုကျမှုတွင် သေဆုံးခဲ့သူနှစ်ဦး၏အလောင်းကို ရှာတွေ့
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၇- မင်းလှမြို့ နယ်အတွင်း ကျောက်မီးသွေးတွင်း ပြိုကျမှုကြောင့်ပိတ်မိနေသည့် အလုပ် သမားလေးဦးအနက် နှစ်ဦး၏အ လောင်းကို ရှာတွေ့ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မင်းလှမြို့နယ်၊ ရေနံမနယ်မြေ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ လက်ထောက်မီး သတ်ဦးစီးမှူး ဦးရန်လင်းက "နှစ်...
ရေတံခွန်တောင် ဂေါက်ကွင်းစီမံကိန်းခြံဝင်းခတ်စဉ် ဖြစ်ပွားသည့်ပဋိပက္ခတွင် ဒေသခံတောင်သူ ၁၀ဝ ကို တာဝန်ဝတ္တရားနှောင့်ယှက်သည်ဟုဆိုကာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပုဒ်မခြောက်ခုဖြင့်အမှုဖွင့်
မန္တလး၊ ဩဂုတ် ၂၆ -မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရေတံခွန်တောင် ဂေါက်ကွင်းစီမံ ကိန်းဧရိယာ ခြံစည်းရိုးခတ်ရာတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ရဲ တပ်ဖွဲ့က တာဝန်ဝတ္တရားနှောင့် ယှက်သည်ဟုဆိုကာ ဒေသခံတောင် သူ ၁၀ဝ ကို ပုဒ်မခြောက်...
တာချီလိတ်၊ ဩဂုတ် ၂၆- ရှမ်း ပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)ရှိ မြို့နယ် ရှစ်မြို့နယ်၌ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး အပိုဆောင်း တိုက်ကျွေးခြင်း အစီ အစဉ်ကို ဩဂုတ် ၂၆ရက်မှ ၂၈ ရက်ထိ မွေးကင်းစမှ ငါးနှစ်အောက် ကလေး ခုနစ်သောင်းကျော်အား...
အောင်လံ၊ ဩဂုတ် ၂၆ - မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့ မြောက် ဘက် ကြို့ပင်ရွာနှင့်ဥယျာဉ်ကျေး ရွာအကြားရှိ ရေဆုံးချောင်းအတွင်း ဩဂုတ် ၂၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီ ခွဲက အမျိုးသမီးတစ်ဦး...
လောကနန္ဒာဘေးမဲ့တောဥယျာဉ်မှ ကြယ်လိပ်များ သံလုံးကောင်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုမဖြစ်ပွားစေရန် ကြယ်လိပ် ၃၉၀ ကို သံချဆေးရည်တိုက်ကျွေး
ညောင်ဦး၊ ဩဂုတ် ၂၅- ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးမြို့နယ်ရှိ လောကနန္ဒာ ဘေးမဲ့တောဥယျာဉ်၌ မွေးမြူး ထားသောကြယ်လိပ်များ သံလုံး ကောင်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသောကြောင့် ယခု အခါ ကြယ်လိပ်များသေဆုံးမှုမရှိ စေရန်သံချဆေးရည် (Panacur)...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်အုပ်စုက အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ၊ လူမ?
နိုက်ကလပ်မှအပြုအမူများအတွက် ကစားသမားများကို အမ်မရီသတိပေးမည်၊ ဟိုးလ်ဒင်း၏ဒဏ်ရာပြဿနာရှိေ??
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ရခြင်းမှာ ကိုဟင်အား ဒီမိုကရက်တို့က စစ်ဆေးမေး?
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပြုံယမ်းနှင့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရန် အမေရိကန် တိုက်တွန်း
ရွှေတြိဂံဒေသ လူငယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (ဆေးဖြတ်စခန်း) ရန်ပုံငွေအတွက် စက်ဘီးစီးအဖွဲ့ ကချင်ပြည်